Dowladda iyo Ahlu-Sunna oo Gaaray Heshiin kama Dambeys ah. - Awdinle Online
Dowladda iyo Ahlu-Sunna oo Gaaray Heshiin kama Dambeys ah.
December 7, 2019 (AO) – Warar lagu kalsoon yahay oo iminkadan inaga soo gaarey Magaaladda Dhuusamareeb Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa lagu xaqiijinayay in Dowladda Federalka Soomaaliya ay u ogolaatay in Ururka Ahlu-Sunna la siiyo 20 Xildhibaan oo qeyb ka ah 89 ka Xildhibaan ee Baarlamaanka Galmudug uu ka koobanyahay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku siidarayaan in heshiis qoraalka rasmi ah Ahlu-Sunna iyo Dowladda Federaalka ah ay kala saxiixan doonaan, Halkaana laga sii amba-qaadi doono xulista xildhibaanada cusub ee Dowladd Gobaleedka Galmudug.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegey inuu meel uga soo hari doono arimaha Dowladd Gobaleedka Galmudug oo dhismihiisu uu noqdey mashruucii Faanoole.
Previous articleGreece to expel Libyan ambassador with in 24hours, over maritime deal with Turkey
Next articleDowladda Djibouti oo u Sharaxan Kuriga Afrika ee Golaha Amaanka